कर्णालीमा कोरोना : कसरी जोगिए चार जिल्ला ? – Sajha Bisaunee
कर्णालीमा कोरोना : कसरी जोगिए चार जिल्ला ?
साझा बिसौनी संवाददाता । २१ जेष्ठ २०७७, बुधबार ०७:३४ मा प्रकाशित
कर्णाली प्रदेशका ६ जिल्लामा कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिएको छ । मंगलवारसम्म प्रदेशका चार जिल्ला संक्रमणबाट जोगिएका छन् । जाजरकोट, रूकुम–पश्चिम, डोल्पा र हुम्लामा कोरोना संक्रमण नदेखिएको हो । हालसम्म प्रदेशमा संक्रमण देखिएका अधिकांश व्यक्ति पछिल्लो समय भारतबाट आएर क्वारेन्टाइन बसिरहेकाहरू हुन् ।
जुम्लामा भने दुई जना प्रहरीमा पनि कोरोना संक्रमण देखिएको छ । योसँगै संक्रमण समुदायस्तरमा गएको पुष्टि भएको छ । मंगलवारसम्म प्रदेशका दुई सय ६२ नागरिकमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । जसमध्ये अछाम, बझाङ र बाजुराका गरी १२ जनामा सुर्खेत प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणबाट संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
जाजरकोटमा भारतबाट आएका एक हजार पाँच सय ३७ नागरिक क्वारेन्टाइनमा बस्दै आएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु साहनीले जानकारी दिए । उनका अनुसार जाजरकोटमा अहिलेसम्म कोरोना परीक्षण गरिएको छैन । पाँच सय २५ जनाको स्वाब मंगलवार मात्रै परीक्षणका लागि कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा सुर्खेतमा पठाइएको छ । जाजरकोटमा लकडाउनयता भारतबाट झण्डै सात हजार मान्छे भित्रिएको अनुमान छ । भारतबाट फर्कनेको संख्या ठूलो भएकाले यो जिल्ला पनि संक्रमणको उच्च जोखिममा छ । तर, हालसम्म यहाँका नागरिकको कोरोना चेकजाँच भएको छैन ।
प्रजिअ साहनीले जिल्लामा लकडाउनको पूर्णपालना भइरहेका कारण पनि संक्रमण नदेखिएको हुनसक्ने बताए । बाहिरबाट आएकाहरूलाई अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरिएको जानकारी दिए । ‘क्वारेन्टाइन अवधि पुगेकाको स्वाब सङ्कलन गरेर जाँच गर्न पठाएका छौं,’ उनले भने । जिल्लामा कोरोनाको महामारी फैलन सक्ने पूर्वानुमान गरी प्रतिकार्यका लागि पूर्ण तयारी गरेकाले जोखिम कम भएको उनले दाबी गरे । उनका अनुसार जाजरकोट जिल्ला अस्पतालमा १२ बेड क्षमताका आइसोलेसन छन् ।
प्रदेशको डोल्पा जिल्लामा पनि हालसम्म कोरोना संक्रमण देखिएको छैन । डोल्पामा भारतबाट आउनेको संख्या समेत न्यून छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारका अनुसार भारतबाट जिल्ला भित्रिनेको संख्या हालसम्म करिब ६० भन्दा बढी छैन । भारतबाट भित्रिनेको संख्या न्यून हुनु, देशका अन्य जिल्ला तथा तेस्रो मुलुकबाट आएकाहरूलाई अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राखी परीक्षण पश्चात् मात्रै घर पठाउनु र लकडाउनको पूर्णपालना गरेकै कारण कोरोना संक्रमणबाट अहिलेसम्म जिल्ला जोगिएको उनको दाबी छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले पछिल्लो समय भारतबाट आएका तीन जिल्ला डोल्पा, मुगु र हुम्लाका नागरिकलाई सुर्खेतमै क्वारेन्टाइनमा राखेर परीक्षण पछि मात्रै जिल्ला पठाउने निर्णय गरेको छ । जसका कारण डोल्पामा अब झनै संक्रमणको जोखिम टरेको प्रजिअ सुनारले बताए । जिल्लामा हालसम्म शंकास्पद दुई सय ३४ जनाको स्वाब सङ्कलन गरी परीक्षणका लागि पठाइएको उनले जानकारी दिए । डोल्पामा ५३ स्थानमा क्वारेन्टाइन निर्माण गरी बाहिरबाट आएका नागरिकलाई राख्ने गरिएको छ ।
प्रदेशको हुम्ला जिल्लामा पनि हालसम्म कोरोना संक्रमण भेटिएको छैन । भारतबाट करिब २ सयको हाराहारीमा जिल्ला भित्रिएकोमा सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनिता भट्टराईले बताइन् । उनले जिल्लाका वडास्तरसम्म कोरोना प्रतिकार्यको लागि काम भएको र प्रदेश सरकारले समेत परीक्षणमा सहयोग गरेकाले हालसम्म संक्रमणबाट जोगिएको बताइन् । हुम्लामा समुदायस्तरमा कोरोना संक्रमण फैलने डर नभए पनि क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरूलाई भने संक्रमणको त्रास अझै रहेको उनको भनाइ छ ।
यस्तै मुगुमा एक जनामा मात्रै कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको प्रदेश स्वास्थ्य सेवा महाशाखाले जनाएको छ । सुर्खेतमा गरिएको परीक्षणमा एक जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो । उनी सुर्खेतमै उपचाररत छन् । परीक्षण नै नभएका कारण जिल्लामा संक्रमण नदेखिएको हुनसक्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णकुमार निरौलाले बताए । उनले परीक्षणको दायरा कम भएर पनि कोरोना संक्रमण नदेखिएको हुनसक्ने बताएका हुन् । मुगुको खप्तड गाउँपालिकामा मात्रै एक हजार नागरिक भारतबाट आउने अनुमान गरिएको उनले बताए । स्थानीय तहहरूले आफैं किट खरिद गरेर परीक्षणको दायरा बढाउने तयारी गरिरहेको उनले जानकारी दिए । जिल्लामा चार सय ५० भीटीएम खरिद गरी ल्याउने तयारी गरिएको प्रजिअ निरौलाले बताए । यसअघि जिल्लामा तीन सय ५७ जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको छ ।
मुगुमा चार सय १० बेड क्षमताका क्वारेन्टाइन र २७ बेड क्षमताका आइसोलेसन छन् । भविष्यमा आउनसक्ने महामारीलाई मध्यनजर गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा १० बेडको आइसोलेसन र चिकित्सकहरूको व्यवस्था गरिएको प्रजिअ निरौलाले बताए । यस्तै रूकुम–पश्चिममा पनि हालसम्म कोरोना संक्रमण देखिएको छैन । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार जेठ २ गते यता मात्रै भारतबाट कर्णाली भित्रिनेको संख्या करिब ३१ हजार पुगेको छ ।